Xfce 4.10 sii deynta oo dib loo dhigay | Laga soo bilaabo Linux
Sii deynta Xfce 4.10 dib ayey u dhacday
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, Aplicaciones, GNU / Linux
Waxaan si walwal leh u sugayaa bisha Janaayo inay u timaado inaan ku raaxaysto nooca xiga Xfce waxaana soo baxday in, sida aad ku arki karto gudaha jadwalka sii deynta, Xfce 4.10 nala joogi maayo ilaa 11-Mar-2012.
Sidii horeba ayaa faallo ka bixiyay Noocani kuma jiri doono isbadalo waaweyn laftiisa, halkii wuxuu noqon doonaa sii deyn halkaasoo faahfaahinta qaar ee isticmaaleyaasha ay soo tebinayaan la nadiifin doono. Asal ahaan waxa aan ku arki doonno noocyadan waa kuwan soo socda:
Ku hagaaji waayo-aragnimada isticmaaleyaasha cinwaanada.
Isku dar marinnada fog ee gunta dhinac.
Hagaajinta ka jawaab celinta howlaha faylka.
Qalabka cusub ee loo yaqaan 'thunar' si loo bixiyo shaqeynta xfdesktop.
Isku dar shaqeynta of xfrun4 y xfce4-appfinder hal codsi.
U oggolow isticmaaleyaasha in ay ku daraan ficilada gaarka ah.
Kudar kumbuyuutar weel loogu talagalay meelaynta walxaha ku jira guddiga si aad u jilicsan.
Ku hagaaji dhammaan wadahadallada shaashadaha yaryar.
Gaabinta kiiboodhka "adkayso"
Mawduucyada rakibidda fudud.
Hagaajinta dejinta tilmaamaha.
Hagaajinta marin u helida kombiyuutarka Xfce iyo isdhexgalka Orca.
Hagaag, waxba wiilal, sug. Waxa ugu fiican ee tan ku saabsan waa tan, sida aan hadda u isticmaalayo archlinux, haddii markaa aan ku rakibo kumbuyuutarkayga, waxaan heli doonaa nooca cusub isla markiiba 😛
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Sii deynta Xfce 4.10 dib ayey u dhacday
Waxyaabaha wanaagsan waxaa loo sameeyaa in la sugo, midhaha ayaa aad u dhadhan fiican leh markay bislaadaan, taas oo ah, kaliya halka ay marayso, tani waa XFCE.
Waxaan rajeynayaa inay xalliyaan cayayaanka nooca 4.8 uu leeyahay ee igu kalifay inaan dib ugu laabto nooca 4.6.2 🙁
Dhibaato noocee ah ayaa cayayaanku kuu keenay? Waxaan ugu adeegsaday Debian iyo hadda Arch illaa iyo hadda wax dhib ah igama helin.
Daqiiqadaan ma xasuusto sida saxda cayayaanka waxa uu ahaa laakiin waxaan xasuustaa inay ku xirneyd laxamiistaha
Hagaag, waxaan isku dayaa oo isku dayaa inaan isticmaalo Xfce laakiin aniga ima haboona hahaha.
Dhibaato ayaan ku qabay inaanan ogaan karin darawalkeyga adag, hadda maareeyaha shabakadda ama wicd pfff ma shaqeeyo
Ku jawaab kik1n
Waan yara murugooday warka, laakiin waxaan ku faraxsanahay in dib u dhaca ku yimid ay sabab u tahay xaqiiqda ah inay waqti badan ku qaadaneyso nooca cusub inuu noqdo mid qaan gaadh ah iyo barta uu ku sugan yahay. Waxaan rajeyneynaa Thunar inuu la imaan doono muuqaalka Nautilus F3, taasi wey fiicnaan laheyd! Qofna kuuma sheegin? Sideen kuu ogeysiin karnaa?
Horey ayaa looga hadlay, isla barta internetka ee abuurayaasha waxaa ku jira dhowr wada sheekeysi oo ku saabsan. Muhiimadu waxay tahay inay rabaan inay ka dhigaan sida ugu fudud ee suurtogalka ah ikhtiyaarka ay siiyeenna waa inay ku riixaan badhanka dhexe ee jiirka (giraangirta) galka la xushay oo ay furaan tusaale kale oo daaqadda ah. Aniga runta iima muuqato wax waalan oo aan lahayn tab ay awoodaan inay furaan daaqado dhowr ah.
Ku jawaab nerjamartin
Waad salaaman tahay, Nerjartin. Waad ku mahadsantahay jawaabtaada. Waan fahansanahay fududaanta, laakiin gudiga oo loo qaybiyo labo si ay ula shaqeeyaan laba fayl waa mid aad waxtar u leh marka la abaabulayo faylasha iyo faylalka. Ma ahan wax wow!, Laakiin waa u qalantaa ragga Xfce inay hirgeliyaan, sida ay u sameeyeen habka looga saaro aagagga nooca hadda jira: muuqaal aad loogu riyaaqay Gnome.
Waad ku mahadsantahay macluumaadka, ma aanan ogeyn in daaqad kale ay ku furan doonto badhanka dhexe.
nerjamartin: Waxaan ku weydiinayaa su'aal aad u fudud Aynu dib ugu noqono Internet Explorer 6. Sidee ayey ugu fududahay la socoshada, iyadoo daaqad keli ah la isticmaalayo tabs ama daaqad loogu talagalay degel kasta?
Nuqul aad u fiican !!! 😀
oo kan kale muxuu yidhi ???
David kaneecada dijo
Marka hore, hambalyo barta, waa mid aad u wanaagsan, waa mid ka mid ah bogagga ku qoran Isbaanishka oo leh macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xfce, waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad ku sii socoto xariiqdan!
Miyaad iga caawin kartaa dhibaato yar, waxaan ku rakibay mawduuca ambiance ee debian 6 oo leh xfce, waxaana jira codsiyo si fiican u muuqda, laakiin kuwa kale sida evince ama pdfedit waxay u muuqdaan kuwo aad u xun, halkan waxaa ku yaal sawirro qaar:
Fikrad kasta sida loo hagaajiyo? Waad ku mahadsantahay horay, waxaan ku cusubahay xfce.
Salaan iyo bog aad u fiican !!
Jawaab David Mosquera
Qaali, haddii qofna uusan ka soo jawaabin codsigaaga caawimaad, waa iska caadi sababtoo ah meeshu meesha ma aha, waxaan kugula talinayaa inaad booqato golaha http://foro.desdelinux.net/index.php saxiix oo la wadaag dhibaatadaada.
Iyo ... sidee ayey Android ugu socotaa dhismooyinka kale?
Marka ay timaado daalacashada, wax hagaagsan ma jiraan